Manohitra ny Vavolombelon’i Jehovah i Rosia
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Alemà Anglisy Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tiorka Tseky Yorobà
SAINT-PÉTERSBOURG, Rosia—FENO 125 taona tamin’ny 2016 ny zava-nitranga niavaka iray tany Rosia. Tamin’izay no noroahin’ny manam-pahefana rosianina tao amin’ny tanànany i Semyon Kozlitskiy, anisan’ny Vavolombelon’i Jehovah voalohany tany Rosia, satria nitory ny hafatra avy ao amin’ny Baiboly. Tsy notsaraina akory izy fa tonga dia nofatorana ary nalefa sesitany tany Siberia, tamin’ny 1891. Tany foana izy mandra-pahafatiny tamin’ny 1935.
Na efa zato taona mahery aza izay no lasa, dia mbola tsy niova ihany ny fankahalan’i Rosia ny Vavolombelon’i Jehovah. Hita amin’ny tatitra vao haingana navoakan’ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona fa mbola ‘tsy avelan’i Rosia haneho hevitra sy hanaraka an’izay fivavahana tiany ihany ny fikambanana sasany, anisan’izany ny Vavolombelon’i Jehovah’, ary maro ny porofo mampiseho an’izany.
Atoa Heiner Bielefeldt, Mpanao Tatitra Manokana eo Anivon’ny Firenena Mikambana, momba ny zo hanaraka an’izay finoana na fivavahana tiana.
Ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona no nasaina hanara-maso an’izay firenena tsy manaraka an’ilay Fifanarahana Iraisam-pirenena Momba ny Zo Sivily sy Politika. Anisan’ireo firenena nanao sonia an’io fifanarahana io mantsy i Rosia. Hoy i Heiner Bielefeldt, Mpanao Tatitra Manokana eo Anivon’ny Firenena Mikambana momba ny zo hanaraka an’izay fivavahana tiany na hino an’izay tiany hinoana: ‘Fantatr’ireo namolavola an’io fifanarahana io fa tena zava-dehibe ilay hoe manan-jo hanaraka an’izay fivavahana tiany na hino an’izay tiany hinoana ny olona, ka tsy azo iadian-kevitra, izany hoe tsy azo esorina na ampandeferina, izany zo izany, na dia misy olana lehibe aza (Andininy 4.2). Vitsy amin’ireo karazana lalàna mifandray amin’ny zon’olombelona no hoatr’izany.’ Manao tatitra foana momba an’i Rosia ilay Komity. Hoy izy io tao amin’ilay tatitra farany nataony, taorian’ilay fivoriana faha-113 (jereo ny sary etsy ambony): ‘Hoatran’ny hoe anisan’ireo miaro ny zon’ny olona hanana ny fivavahany i Rosia rehefa nanao sonia an’ilay fifanarahana. Raha ny marina anefa, dia manohitra ny Vavolombelon’i Jehovah ny fitsarana rehetra ao aminy, ka lalàna natao hanoherana ny fampihorohoroana no ampiasainy amin’izany.’
Nanomboka nampihatra an’ilay Lalàna Natao “Hanoherana ny Fampihorohoroana” (No. 114-FZ) i Rosia tamin’ny 2002, ary hiadiana amin’ny fampihorohoroana no anisan’ny anton’ilay izy. Novan’i Rosia anefa ilay lalàna tamin’ny 2006 sy 2007 ary 2008. Lasa nitatra be àry ilay izy ka ‘na dia zavatra hafa tsy misy ifandraisana amin’ny herisetra sy fampihorohoroana aza dia voakasika’, araka ilay lahatsoratra hoe “Manitsakitsaka ny Zon’olombelona ny Lalàna Rosianina Natao Hanoherana ny Fampihorohoroana”, navoakan’ny The Moscow Times. Hoy Atoa Derek Davis, izay efa talen’ny Fikambanan’i J. M. Dawson, Mandinika ny Fifandraisan’ny Fivavahana sy Fanjakana, ao amin’ny Oniversiten’i Baylor: “Lasa nalaza be eran-tany ilay teny hoe ‘mpampihorohoro’ taorian’ilay fanafihana an’ireo Tranobe Kambana tany [New York], tamin’ny Septambra 2011. Dia io teny io fotsiny koa izao no hararaotin’i Rosia ka ampiasainy hiantsoana an’ireo fivavahana tsy dia tiatiany. Ilay anarana hoe ‘mpampihorohoro’ àry no iantsoany ny Vavolombelon’i Jehovah mba hanoherana azy, kanefa tsy rariny mihitsy izany sady tafahoatra.”
Hitan’ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona fa tsy mazava tsara ny hamaritan’ilay lalàna ny atao hoe mampihorohoro, ka izay no tena fototr’ilay olana. Nanazava tamin’ny The Washington Post i Geraldine Fagan, mpanoratra an’ilay boky hoe Believing in Russia—Religious Policy After Communism: ‘Malalaka be loatra ny teny ampiasaina ao amin’ilay lalàna ka aiza moa izany no tsy hararaotin’ny fitsarana hanoherana ny Vavolombelon’i Jehovah! Mitaona manam-pahaizana mety hoe tsy tia Vavolombelon’i Jehovah ry zareo, dia ireo no asainy manao tatitra hoe mampidi-doza ny lahatsoratra avoakany.’
Nisy zavatra hoatr’izany nitranga tamin’ny fiandohan’ity taona ity. Nanaratsy ny lahatsoratra navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah ny manam-pahaizana iray momba ny teny, ka roa tamin’ny gazetin’izy ireo no nolazain’ny mpitsara tao Vyborg hoe mampidi-doza. Nametraka fitoriana koa ilay mpampanoa lalàna tamin’io raharaha io, ka nolazainy fa mampidi-doza, hono, ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao, ilay Baiboly navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Nanomboka tamin’ny 15 Martsa 2016 ny fitsarana an’io raharaha io.
Boky sy gazety ara-baiboly tokony ho nalefa tany Rosia, ka tafajanona tany amin’ny Sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Eoropa Afovoany, any Selters, Alemaina. Nanomboka tamin’ny Martsa 2015 mantsy dia tsy navelan’ny mpiasan’ny doanina any Rosia hanafatra boky sy gazety avy any ivelany intsony ny Vavolombelon’i Jehovah any.
Nisy zavatra maromaro nitranga tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny 2015, ka efa tsinjon’izy ireo hoe hahita olana eny amin’ny fitsarana izy ireo amin’ny 2016. Hoy i Roman Lunkin, Talen’ny Foibem-pampianarana Momba ny Fivavahana sy Fiaraha-monina, ao amin’ny Oniversite Rosianina Fianarana Siansa any Eoropa, any Moscou: “Tsy hoe nihanahery vaika fotsiny ny fanenjehana tamin’ny 2015 fa nihabetsaka koa.” Tamin’ny Martsa, ohatra, dia nosakanan’ny manam-pahefana tsy hiditra tany Rosia ny boky sy gazety rehetra nohafaran’ny Vavolombelon’i Jehovah. Norarany koa na dia ireo boky efa nodinihin’ny fitsarana rosianina sy nolazainy hoe tsy mampidi-doza aza. Tsy navelan’ny mpiasan’ny doanina hiditra tany koa ny Baiboly amin’ny teny rosianina navoakan’ny Vavolombelona, tamin’ny Jolay. Tsy izay ihany fa norarany koa ny tranonkalan’ny Vavolombelon’i Jehovah jw.org tamin’io volana io, ary i Rosia irery no firenena eto an-tany manao an’izany. Tsy navela nanafatra ny Baibolin’ny Synoda Rosianina koa ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny Novambra, nefa Baiboly fampiasan’ny fivavahana hafa any Rosia izy io, anisan’izany ny Eglizy Ortodoksa. Tsy vitan’izay fa niakatra fitsarana ny Vavolombelon’i Jehovah tany, tamin’ny faran’ny taona 2015. Nilaza ny The Washington Post hoe io no anisan’ny “fitsarana niavaka indrindra hiadiana amin’ny mpampihorohoro tany Rosia.” Vavolombelon’i Jehovah 16 no nomelohin’ilay mpitsara tao Taganrog tamin’izay. Nahoana? Nandamina sy nanao fotoam-pivavahana nilamina tsara izy ireo, dia nampangaina hoe mpampihorohoro.
Misy zavatra mahatsikaiky ihany amin’ilay raharaha tany Taganrog sy tany an-toeran-kafa. Nilaza Atoa Lunkin fa “na ireo Vavolombelon’i Jehovah efa zokinjokiny aza efa nahazo taratasy manamarina hoe tsy meloka izy ireo fa niharan’ny tsy rariny fotsiny.” Vavolombelon’i Jehovah an’arivony mantsy no nogadraina tany amin’ny Firaisana Sovietika. Tamin’ny 1990 no nafahana ny farany tamin-dry zareo. Rehefa nafahana ry zareo, dia samy nomen’ny fanjakana taratasy tsirairay manamarina hoe “tsy fahavalon’ny firenena” ry zareo, fa olona tsy nanan-tsiny. Efa nadio ny lazan-dry zareo teo anatrehan’ny lalàna. Izao anefa, hoy Atoa Lunkin, dia “hoatran’ny hoe manipaka an’ilay taratasy fanamarinana nomeny ny fanjakana rosianina, satria lalàna hiadiana amin’ny mpampihorohoro no ampihariny” amin’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Mahalana ny Vavolombelon’i Jehovah tany Rosia vao mba nandresy teny amin’ny fitsarana. Nandresy anefa izy ireo tamin’ny 27 Mey 2015, satria naverin’ny Minisiteran’ny Fitsaran’ny Federasionan’i Rosia nosoratana ho ara-dalàna indray ny Fikambanana Ara-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah tao Moscou. Nofoanana mantsy ilay fikambanana tamin’ny 26 Martsa 2004. Nampakatra an’ilay raharaha tany amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona (CEDH) ny Vavolombelon’i Jehovah. Nanome baiko an’i Rosia àry ny CEDH tamin’ny 10 Jona 2010 hoe mila averiny soratana ara-dalàna indray ny Vavolombelon’i Jehovah any Moscou. Nandidy koa izy io hoe mila mandoa onitra amin’ny Vavolombelon’i Jehovah i Rosia.
I Lyubov sy Alexey Koptev, izay samy Vavolombelon’i Jehovah. Mifamihina eo amin’ilay zaridainan-dry zareo ao Taganrog, any Rosia izy ireo tamin’io, izany hoe tamin’ny 11 Novambra 2015. Nomelohin’ny fitsarana tao Taganrog mantsy Atoa Koptev sy ny Vavolombelona 15 hafa tamin’ny 30 Novambra 2015, satria hoe nanao asa fampihorohoroana, izany hoe nandamina sy nanao fotoam-pivavahana. Efa misotro ronono Atoa Koptev, ary efa manana zafikely. Nahazo marim-pankasitrahana tamin’ny fanjakana izy, satria nanao tsara ny asany nandritra ny 38 taona tany amin’ny orinasa anankiray (‘Krasnyy Kotelshik’).
Hoy ilay Mpanao Tatitra Manokana eo Anivon’ny Firenena Mikambana: “Mitovy hevitra amin’ny CEDH aho. Tafahoatra loatra ilay fandrarana ny Vavolombelon’i Jehovah. Aiza ve ry zareo ka tsy avela manao ny zavatra fanaon’ny fivavahany! Tsy fanajana ny zo hanana an’izay fivavahana tiany izany.” Nanaraka ny didy navoakan’ny CEDH tokoa aloha i Rosia. Naloan-dry zareo ilay onitra saingy tsy mbola nataony ara-dalàna ny fivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah, raha tsy efa tamin’ny volana Mey lasa teo, izany hoe efa ho 5 taona taorian’ilay didy navoakan’ny CEDH.
Taratasy manamarina hoe tsy meloka ny olona iray. Vavolombelon’i Jehovah an’arivony no nogadraina nandritra ny fitondran’ny Firaisana Sovietika. Samy nomena an’io taratasy fanamarinana io izy tsirairay rehefa nafahana, mba hanaporofoana hoe tsy “fahavalon’ny firenena” izy ireo ary efa madio ny lazan-dry zareo eo anatrehan’ny lalàna.
Hoy i Yaroslav Sivulskiy, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia: “Misy 175 000 eo ho eo ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia, ary any Moscou ny 9 600 mahery amin-dry zareo. Mbola manantena foana ry zareo fa havela hanaraka tsara ny fivavahany amin’izay, matoa nosoratana ho ara-dalàna ny fikambanany any Moscou. Manantena an’izany daholo koa ireo Vavolombelona 8 tapitrisa eran-tany.” Ahoana anefa ny hevitry ny manam-pahaizana? Hoy, ohatra, Atoa Davis: “Politika fotsiny no nahatonga an’i Rosia hanaiky ny fikambanan’ny Vavolombelon’i Jehovah ho ara-dalàna. Te hampangina ny fiaraha-monina iraisam-pirenena fotsiny ry zareo dia nanao an’izany!”
Efa nampirisika an’i Rosia foana ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona tamin’ny 2003 sy 2009 fa “tokony hovany tsy misy hataka andro ilay Lalàna Natao Hanoherana ny Fampihorohoroana.” Mbola naveriny ihany izany tamin’ny 2015 ka hoy izy: ‘Tokony hataony mazava tsara ny dikan’ilay hoe “asa fampihorohoroana.” Tokony hataony azo antoka hoe izay zavatra misy herisetra na fankahalana ihany no tafiditra amin’ilay hoe asa fampihorohoroana. Mila hazavainy tsara koa hoe rehefa hoatran’ny ahoana ny lahatsoratra na zavatra anankiray no azo lazaina fa mampidi-doza.’ Niangavy mafy an’i Rosia koa ilay komity mba “handray fepetra hentitra, ka tsy hampihatra an’ilay lalàna amin’ny fomba tsy ara-drariny. Nasainy nanova an’ilay Lisitr’ireo Zavatra Mampidi-doza koa i Rosia.”
I Nikolay Trotsyuk (ilay faharoa avy eny ankavanana). Nogadraina telo taona izy, satria tsy nety hanao miaramila nandritra ny fitondran’ny Firaisana Sovietika. Mbola nomelohina toy ny mpanao heloka bevava ihany izy tamin’ny 30 Novambra 2015, saingy tsy izy irery tamin’ity indray mandeha ity. Voaheloka niaraka taminy koa i Andrey Goncharov vinantolahiny (eny amin’ny farany havia), Oksana Goncharova zanany vavy (fahatelo avy eny an-kavia), Sergey Trotsyuk zanany lahy (eny amin’ny farany havanana), ary ny Vavolombelona 12 hafa tao Taganrog.
Hoy ihany Atoa Lunkin: “Tena haratsiam-panahy mihitsy ilay ataon’i Rosia, satria manavakavaka fivavahana. Misy fikambanana hafa mantsy mba manao hoatran’ny Vavolombelon’i Jehovah koa nefa tsy saziny, fa ny Vavolombelon’i Jehovah saziny.” Ampangaina tsy ara-drariny foana ny Vavolombelon’i Jehovah ka haratsiratsina be amin’ny haino aman-jery. Na dia eo aza anefa izany rehetra izany, dia hoy Atoa Lunkin: “Mbola hoatran’ny fianakaviambe eran-tany ihany ny Vavolombelon’i Jehovah, ary tsy mitsaha-mitombo ny isan-dry zareo.”